किन आउँदैछन् पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नेपाल ? यस्तो रहेछ वास्तविकता : – Setosurya
किन आउँदैछन् पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नेपाल ? यस्तो रहेछ वास्तविकता :
सोमबार २१, फागुन २०७४
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिन भन्दै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहीद खाकान अब्बासी सोमबार नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँको स्वागतका लागि काठमाडौंका सडकमा पाकिस्तान र नेपालका झण्डा राखेर झकिझकाउ पारिएको छ ।
विश्वका शक्ति राष्ट्रहरु धु्रविकरण भईरहेको अवस्थामा चीनतर्फ नजिकिएको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री अब्बासीको नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । औपचारिक रुपमा बधाइ दिन भनिएपनि अब्बासीको दुई दिने नेपाल भ्रमणको मुख्य उदेश्य सार्क शिखर सम्मेलन भएको बुझाइ छ ।
पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा सन् २०१८ नोभेम्बर ९ र १० गतेका लागि १० औँ सार्क शिखर सम्मेलन गर्ने मिति तय भएको थियो । तर भारत प्रशासित जम्मुकाश्मिरको उरी भन्ने ठाउँमा विद्रोही समूहले आक्रमण गरेर १७ जना भारतीय सैनिकको हत्या गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण भयो ।
भारतले पाकिस्तानबाट आएका विद्रोहीले आक्रमण गरेको भन्दै पाकिस्तान विरुद्ध ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ पनि ग¥यो । त्यस अवधिमा दुवै देशका सैनिक र गैरसैनिक गरी दर्जनौको ज्यान गयो ।
दक्षिण एशियामा परमाणु बम रहेका शक्तिशाली राष्ट्र भारत र पाकिस्तानको विवादले उग्र रुप लिंदै गएपछि निर्धारित समयमा सार्क सम्मेलन हुन सकेन । भारतसहित बंगलादेश, अफगानिस्तान र भुटानले पाकिस्तानमा हुने सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएपछि १९ औँ सार्क शिखर सम्मेलन अनिश्चित छ ।
वर्णानुक्रमका आधारमा सार्कको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था अनुसार हाल नेपालले सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको छ । नेपालले सार्कको शिखर सम्मेलन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे पनि पाकिस्तानमा नै गर्नुपर्छ वा अन्यत्र सारेर गर्ने भन्ने बारेमा आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको छैन ।
नेपाल अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न अनुकूल वातावरण बनाउन आग्रह गर्न पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नेपाल आउन लागेको विश्लेषण हुन थालेको छ । २०७१ मंसिर १०–११ गते काठमाडौँमा सम्पन्न १८ औँ शिखर सम्मेलनमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुबै देशका प्रधानमन्त्रीको हात मिलाएर सम्बन्ध सुधारको प्रयास गर्नु भएको थियो । नेपालको त्यो नेतृत्वदायी भूमिका र मध्यस्थताकर्ताको महसुस गर्दै अब्बासी नेपाल आउन लागेको परराष्ट्रविदहरुको भनाई छ ।
सार्क सक्रिय होला ?
अहिले दक्षिण एशियाली साझा फोरम सार्क निष्कृय छ । उरी आक्रमणपछि भारतले पाकिस्तानलाई पाखा लगाउन खोज्दा सार्क सम्मेलन अनिश्चित छ ।
यस्तो बेलामा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासीको नेपाल भ्रमण केवल ओलीलाई बधाइ दिने कार्यमा मात्रै सीमित नरही सार्कलाई सक्रिय बनाउने बारेमा पनि नेपाल र पाकिस्तानबीच सार्थक कुराकानी गरे भने यो दक्षिण एशियाकै लागि फलदायी भ्रमण हुन सक्ने देखिन्छ ।
तर भारतले पाकिस्तानमा हुने सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग नलिने प्रष्ट जनाईसकेको छ । यस अवस्थमा सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमै गर्ने कि अरु देशमा गर्ने भन्ने बहस पनि एकातिर छ । यदि अर्काे देशमा हुने भए अंग्रेजी अल्फाबेटका आधारमा हुने सार्ककको नियम अनुसार श्रीलंकामा हुनेछ । भारत पाकिस्तान नजाने र पाकिस्तानले अर्काे देशमा नजाने अडान लिए सार्ककको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्नेछ ।
विगतमा पनि दुई देशको सम्बन्धलाई सुधार गर्न मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेको नेपालबाट अब्बासीले पनि त्यसैको निरन्तरता खोजेको हुन सक्छ ।
नेपाल भारतको सम्बन्ध
नेपाल र भारतबीच भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध रहेको छ । दुई देशबीचको सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ खटपट भएपनि जनस्तरबाटै जोडिएको ‘रोटीबेटी’को सम्बन्धले मजबुत बनाउने गरेको छ ।
पूर्व, पश्चिम र दक्षिण गरी तीन दिशाबाट नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतसँग भौगोलिक सम्बन्ध पनि उतिकै निकटता रहेको छ । युगौंदेखिको दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासीको भ्रमणले खासै असर पर्ने देखिंदैन ।
भौगोलिक रुपमा पनि टाढा रहेको र धार्मिक, साँस्कृतिक रुपमा पनि कम सम्बन्ध जोडिएकाले अब्बासीको नेपाल भ्रभणले भारतसँगको सम्बन्धमा फरक पर्ने देखिदैन ।
तैपनि पाकिस्तान र भारतबीचको कटुता सम्बन्ध रहेको अवस्थमा अब्बासीको नेपाल भ्रमणले भारतको मनमा चिसो भने पस्न सक्छ । मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहेको नेपालसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको पाकिस्तानको उच्चस्तरीय भेटवार्ताले भारत झस्कने ठाउँ भने देखिन्छ ।
बधाई दिन प्रधानमन्त्री आएको संभवत पहिलो
नेपाल र पाकिस्तानबीच यसअघि पनि उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिन भन्दै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नेपाल आएको संभवत पहिलो पटक हो ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासी नेपालको निमन्त्रणामा नभई आफ्नै इच्छामा आउन लाग्नु भएको हो । भ्रमण टोलीमा विदेशमन्त्री खवाजा मोहम्मद असिफ, परराष्ट्र सचिव तेहिमना जान्जुआ, परराष्ट्र प्रवक्ता डा. मोहम्मद फैसललगायत एक दर्जन उच्च अधिकारी रहनेछन् ।
आफ्नै विमानबाट आउन लागेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले नेपाली समकक्षी केपी ओलीसँग सोमबारे रात्री भोजसहित औपचारिक वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसपछि मंगलबार बिहान राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरी स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यलयका अनुसार अब्बासीको भ्रमण ‘कूटनीतिक च्यानल’मार्फत तय भएको हो । नेपाल र पाकिस्तानवीचको सम्बन्ध सार्क फोरममा मात्रै नभई आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पनि छ ।
भारत र पाकिस्तानवीच क्रिकेट म्याच हुँदा नेपाली दर्शकहरुले प्रायः पाकिस्तानी टोलीको सपोर्ट गर्ने गर्छन् । त्यसैगरी भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएका बेला पाकिस्तानीहरुले नेपालको पक्षमा सहानुभूति प्रकट गरेका थिए ।
यसले पनि नेपाल र पाकिस्तानवीचको सम्बन्ध कूटनीतिक मात्रै नभएर भावनात्मक रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
केपी ओली र प्रचण्डले मनाइ छाडे उपेन्द्रलाई ! एकै झड्कामा यसरी जाने भयो फोरम सरकारमा…..
नेपालको सार्वभौमसत्ता माथि भारतले धावा बोलेको भन्दै गृहमन्त्री बादलले दिए यस्तो अभिव्यक्ति !
भारतीय पत्रिका लेख्छ, ‘नेपालमा चिनियाँ प्रभाव रोक्न भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमण’
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन- सेनाको गोलीले तीनको मृत्यु
जेलभित्र झडप, चार जना कैदीको मृत्यु
प्रवासी नेपाली मञ्च जापानको अध्यक्षमा पर्वतका श्रेष्ठ निर्बिरोध
आमा बन्दै ११ वर्षीया बालिका
प्रधानन्यायाधीसविरुद्ध उत्रिए सर्वोच्चका न्यायाधीस
एमालेलाई मनाउने ‘फर्मूला’ खोज्दै प्रचण्ड प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्- ढिलो भयो कामरेड !
अदालतमा विस्फोट, एकको मृत्यु, १० जना घाइते
टर्कीमा आतंककारी हमलाः नयाँ बर्ष मनाइरहेका ३९ को मृत्यु
निर्वाचनका सन्दर्भमा फेरि ओली–प्रचण्ड एकै ठाउँ
नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाकै अगाडी मोदीले दिए नेपाल बिरोधी यस्तो अभिव्यक्ती, देउवा किन चुप ?
१ सय १२ स्थानीय तहमा एमालेले जित्दै पहिलो, हेर्नुहोस् अहिलेसम्मको ताजा अवस्था (सूचीसहित)
सरकारी बेरुजु ८४ अर्ब १३ करोड
आगामी निर्वाचनका लागि ६५ क्षेत्रबाट एमाले उम्मेदवार सर्वसम्मत सिफारिस, कहाँ को ? (सूची)
पुत्र वियोगमा रहेका प्रचण्डको समर्थनमा भरतपुरमा उर्लियो लाखौँको जनलहर
साउन १७ गते जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले नयाँ जनप्रतिनिधी पाउने, को होलान् संयोजक?
कांग्रेस बैठक बस्दै, चुनावीसमिक्षामा गुटको गन्ध
भ्रष्ट छविका कार्कीलाई प्रचण्ड सरकारले रेडियोको कार्यकारी निर्देशक बनाउनुको यस्तो छ रहस्य !
वामपन्थीको किल्ला ठूलीपोखरीमा एमालेको ऐतिहासिक सभा सप्पन्न, पदम गिरीले गरे ७ बुंदे प्रतिवद्दता !
शीतल निवासको बिबाहलाई कसरी कभरेज गरे मिडियाहरुले ?
मोदीले गरे मुक्तिनाथ मन्दिरमा बिशेष पूजा
मन्त्री फेरबदलबारे अहिले सम्मकै सनसनीपूर्ण खुलासा……
निर्वाचनबारे तीन दलबीच सहमति, स्थानीय तहको चुनाव घोषणा केही दिनमै
सांसदहरुले प्रचण्ड, महरा र जनार्दनको पोल खोल्ने धम्की दिएपछि पेरिसडाँडामा भूकम्प…